डिस्क छवि उपकरण। क्लोन ड्राइभ र डिस्क डिस्क प्रतिलिपि सफ्टवेयर।
DataNumen Disk Image क्लोन गर्न र डिस्क वा ड्राइभहरू पुनर्स्थापित गर्न शक्तिशाली उपकरण हो। यसले डिस्क छवि सिर्जना गर्न वा पुन: भण्डार गर्न सक्दछ वा ड्राइव छवि बाइट बाइट बाट। डाटा ब्याकअप र रिकभरी, डिस्क / ड्राइभ प्रतिलिपि र क्लोनिंग, र फोरन्सिकका लागि उपयोगी।
किन DataNumen Disk Image?
तपाईको सहयोगका लागि धन्यबाद! म कसरी काम गर्दछु भन्ने बारे म अत्यन्तै प्रभावित छु।
नोभेम्बर 8th, 2019
डिस्क छविले तीन अन्य पेशेवर प्रोग्रामहरूलाई पुर्‍यायो जुन एक आईएसओ प्रणाली छवि बनाउन असफल भयो - यो एक राम्रोसँग काम गर्‍यो। जबकि यो हुन सक्दैन
डिस्क छविले तीन अन्य पेशेवर प्रोग्रामहरूलाई पुर्‍यायो जुन एक आईएसओ प्रणाली छवि बनाउन असफल भयो - यो एक राम्रोसँग काम गर्‍यो। जबकि यो USB बाट सुरू गर्न सकिदैन र चलिरहेको OS बाट चालित हुनुपर्दछ, यो द्रुत थियो, क्लोन गर्न २ घण्टा भन्दा बढीमा १ टीबी, र यो निर्धक्क पुनःस्थापना गरियो। यसको प्रदर्शनको बल, दुबलापना र उनीहरूले प्रदान गरेको राम्रो समर्थनमा, म उनीहरूको सफ्टवेयरलाई खाँचोमा परेकालाई सिफारिस गर्दछु।
वेन राइस रिटायर्ड
Bostमा, एमए, संयुक्त राज्य अमेरिका
मुख्य सुविधाहरू DataNumen Disk Image v2.2
सबै प्रकारको डिस्क र ड्राइव समर्थन गर्नुहोस्।
छवि डेटा ड्राइभमा फिर्ता पुनर्स्थापित गर्न समर्थन।
भ्रष्ट मिडियाबाट डेटा क्लोन गर्न समर्थन गर्दछ।
क्षतिग्रस्त क्षेत्रहरू निर्दिष्ट डाटा सहित प्रतिस्थापन गर्न समर्थन।
ब्याचमा बहु डिस्क र ड्राइभ क्लोन गर्न समर्थन।
कम्प्युटर फोरेंसिक उपकरण र इलेक्ट्रोनिक खोज (वा e-डिस्कवरी, eDiscovery) उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि आदर्श।
प्रयोग DataNumen Disk Image ड्राइभ र डिस्कहरूको लागि छविहरू सिर्जना गर्न
संग DataNumen Disk Image, तपाईं ड्राइभ र डिस्कको लागि छविहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, विभिन्न उद्देश्यका लागि, जस्तै ब्याकअप, पूर्वावस्था, फोरेंसिक र डाटा रिकभरी।
नोट: यसका साथ ड्राइभ वा डिस्क छविहरू सिर्जना गर्नु अघि DataNumen Disk Image, कृपया कुनै अन्य अनुप्रयोगहरू बन्द गर्नुहोस्।
ड्राइभ वा डिस्क छनौट गर्नुहोस् जसको छवि सिर्जना गर्नुपर्नेछ:
यदि तपाईंले USB ड्राइभमा प्लग इन गर्नु भएको छ, तर यसलाई ड्राइभ वा डिस्क सूचीमा देख्न सक्नुहुन्न। तपाईं क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ बटन र फेरि प्रयास गर्नुहोस्।
अर्को, आउटपुट छवि फाइल नाम सेट गर्नुहोस्:
तपाईं छवि फाईल नाम सिधा इनपुट गर्न सक्नुहुनेछ वा क्लिक गर्नुहोस् छवि फाइल ब्राउज र चयन गर्न बटन।
क्लिक गर्नुहोस् बटन, र DataNumen Disk Image हुनेछtart निर्दिष्ट ड्राइभ वा डिस्कमा डाटा क्लोनिंग गर्दै, त्यसपछि तिनीहरूलाई आउटपुट छवि फाइलमा बचत गर्नुहोस्। प्रगति पट्टी
क्लोन प्रगति संकेत गर्दछ।
क्लोन प्रक्रिया पछि, यदि छवि फाइल सफलतापूर्वक सिर्जना गरियो, तपाईं यो जस्तो सन्देश बाकस देख्नुहुनेछ:
अब तपाईं बिभिन्न उद्देश्यहरूको लागि डिस्क छवि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, सहित:
सक्कली ड्राइभ वा डिस्कको ब्याकअपको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्।
छविलाई मूल ड्राइभ वा डिस्कमा फिर्ता पुनर्स्थापित गर्नुहोस्, वा बिभिन्न ड्राइभ वा डिस्कमा।
छविबाट डाटा पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्।
छविमा फोरेंसिक डेटा विश्लेषण प्रदर्शन गर्नुहोस्।
DataNumen Disk Image 2.2.२ डिसेम्बर १th, २०२० मा जारी हुन्छ
DataNumen Disk Image २. November नोभेम्बर 2.0th, २०२० मा जारी हुन्छ
DataNumen Disk Image 1.9 जून २२, २०२० मा रिलीज गरिएको छ
DataNumen Disk Image १.1.8 फेब्रुअरी १, २०१ 1 मा जारी भयो
डिस्क पुनर्स्थापना प्रकार्य सुधार गर्नुहोस्।
DataNumen Disk Image १. Dec डिसेम्बर,, २०० 1.6 मा जारी भयो
DataNumen Disk Image 1.5 जनवरी २१, २०१ on मा जारी गरिएको छ
छविहरूलाई ड्राइभमा पुन: भण्डारण गर्न समर्थन गर्नुहोस्।
DataNumen Disk Image १.१ अक्टुबर २१, २०१ on मा जारी भयो
क्लोन गति सुधार गर्नुहोस्।
क्लोन प्रक्रियाको तथ्याistic्क जानकारी थप्नुहोस्।
DataNumen Disk Image २.२ सेप्टेम्बर २,, २०१ on मा जारी भयो
Windows Windows,, 95,, ME, NT, २०००, XP, Vista,,, and र सर्भर २००//२००98 / २०१२ लाई समर्थन गर्नुहोस्।
DataNumen Backup तपाईको महत्त्वपूर्ण डेटा र फाइलहरू ब्याक अप गर्न र पुनःप्राप्त गर्न उत्तम उपकरण हो।
DataNumen Archive Repair 3.3.२ डिसेम्बर १th, २०२० मा जारी हुन्छ